Kulan natiijo la’aan ku soo dhamaaday oo xuduuda ku dhex maray Odayaal Dhaqameedyo iyo Saraakiisha Kenya | Baydhabo Online
Kulan natiijo la’aan ku soo dhamaaday oo xuduuda ku dhex maray Odayaal Dhaqameedyo iyo Saraakiisha Kenya
Kulan aanu wax natiijo ihi ka soo bixin, ayaa xadka ay wadaagan dalalka Somaliya iyo Kenya, waxaa uu ku dhex maray Odayaasha Dhaqanka ee Degmada Beled Xaawo iyo Saraakiisha Ciidamada Kenya, ee ku sugan xuduuda Degmada Beled Xaawo la leedahay Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Kulankan oo Odayaasha Dhaqanka ay ku doonayen sidii ay Kenya dib ugu furi laheyd xuduuda, oo maalintii Isniintii ay joojisay dadkii labada dhinac isugu kala gooshaayay, ayaa waxaa uu ku soo idlaaday natiijo la’aan, ka dib markii Saraakiisha Kenya ay sheegeen inaanay amar u qabin dib u furista xadka.
Labada dhinac oo gelinkii dambe ee Arbacadii ku kulmay xuduuda, ayaa waxaa uu kulankoodu ku soo idlaaday natiijo la’aan, iyadoo Saraakiisha Kenya ay sheegeen inaanan la furi doonin xuduuda, iminkana ay ka bilaabeen qorshaha ay darbiga kaga dhisayan.
Nabadoon Axmed Geedi Cali oo ka mid ahaa Odayaashii Dhaqanka ee la kulmay Saraakiisha Ciidamada Kenya, ayaa sheegay in Saraakiishaasi ay ka diiday in dib ay u fasaxan dhaq dhaqaaqii xuduuda.
Nabadoon Axmed Geedi waxaa uu xusay in Saraakiishaasi ay u sheegtay in ay la xiriiran Magaalada Nairobi, haddii ay doonayan in dib loo furo xuduuda.
Nabadoonku waxaa uu intaa ku daray in Kenya ay xuduuda soo dhoobtay gaadiidka dhismooyinka loo adeegsado iyo ciidan lixaad leh, ayna ka dhiseyso darbi kala qaybiya labada dal.
Sidoo kale Nabadoon Geedi, ayaa sheegay in Kenya ay ku keli tahay dhismaha ay ka bilowday xuduuda, mana jirto buu yiri cid ay u sheegeen arrintaasi.
Xukuumadda Nairobi, ayaa waxay ku celcelisay inay meelmarin doonto dhismaha darbigan, iyadoona sababtu ku sheegtay baqdin ay ka qabto weeraro kaga yimaada Al Shabaab.